Tabataban’ny milina eny Antanandrano : omena iray volana hamahana ny olana ny Jirama sy ny minisitera | NewsMada
Voarain’ny filohan’ny Repoblika koa ny fitarainan’ny mponina eny Antanandrano amin’ny tabataba sy ny setroka avoakan’ny milina mamokatra herinaratra. Nomeny fe-potoana iray volana ny Jirama sy ny minisiteran’ny Angovo, hamahana ity olana ity.
Tsy nanome antsipiriany ny filoha Rajaonarimampianina, na hoesorina na atao ahoana, fa anjaran’iretsy tompon’andraikitra roa voalaza ny mikaroka izany ao anatin’io fotoana fohy io. Raha tsy tanteraka izany, handray fepetra ve ny filoha?
Mikasika ny herinaratra ihany, nohamafisiny fa tanterahina ny vahaolana tinapaka tany amin’ny fivoriana Cop 21 tany Paris, ny desambra 2015 teo. Amporisihina ny mpandraharaha na fikambanana na tetikasa tsy miankina misehatra amin’ny famokarana amin’ny angovo azo havaozina. Mampihena ny fanjifana sy ny fiankinandoha amin’ny Jirama izany.